Sababtoo ah bogag kala duwan ayaa leh baahiyo kaladuwan – Waxa aniga iigu fiican aniga ma ahan mid kugu habboon. Purva hordhac ah oo ah 5 – 20 bixiyayaasha martigelinta webka ee ugu wanaagsan ayaa laga yaabaa inay faa’iido u yeeshaan kuwa isku soo ururinaya liitet dukaamaysiga; Dukaanleyda halista ah ee u baahan inay iibsadaan martigeliyaha shabakadda ASAP waxay u baahan doonaan faahfaahin dheeraad ah.
No liiska dheer ee dib u eegistayada martigelinta, Waxaan doortey shirkadaha ugu fiican martigelinta webka ’10’:
1 10 Shirkadaha Marti-gelinta Websaydhada ugu Fiican: Pros-vs-Cons & Spriedums
2.1.1 Šabakada Martida Wadaagga
2.5.1 Marti gelinta Websaydhka Shaqsiyeed ee Ugu Fiican: GreenGeeks, Soo dhaweynta, TMD Hostings Sida marti-gelinta qorayaasha, degel websaydh shakhsiyeed waa inuu noqdaa mid la awoodi karo oo si fudud loo isticmaali karo. Iyada oo aan loo eegin in ay tahay in la daabaco CV-gaaga ama kor u qaadista ‘astaantaada shakhsiga ah’ – Dhisme si sahlan loo isticmaali karo, astaamaha websaydhka, iyo qiime-dhimista la awoodi karo ayaa ah kuwo aad muhi geliyaha websaydhka shaqsiyeed. Kuwa martigelinaya kaliya hal degel internet, Hostinger wuxuu bixiyaa xalka ugu jaban ($ 0.80 / mo diiwaangelinta). TMD hostings iyo GreenGeeks waxay bixiyaan wax qaali ah laakiin waxay martigeliyaan degello aan xadidneyn waxayna bixiyaan taageero macaamiil oo wanaagsan. Pirmdiena, plkst. Fiican ee Isticmaalayaasha Boqortooyada, Pusdiena: Kinsta, SiteGround Si loo fahmo waxa ka dhigaya websaydhka ugufiican goobta gaar ah, waxaan ubaahanahay inaan ka wada hadalno qarsoodi. Waa maxay qarsoodi?
2.6 12. Waxa ugufiican Websaydhada Malaysiya & Kuwa Singapūra
10 Shirkadaha Marti-gelinta Websaydhada ugu Fiican: Pros-vs-Cons & Spriedums
Daahfurka: 3,99 USD / mēn
Jauda: 5,99 USD / mēn
Pro: 13,99 USD / mēn
Tilmaamo atslēga: Domēns bez maksas, kaydinta aan xadidneyn, e-pasts martigalinta, Auto-SSL, dhisaha bogga jiidista iyo dhicitaanka, 90 dienu lacag dammaanad ah.
InMotion Hosting waxaa aasaasay Sunil Saxena iyo Todd Robinson ee 2001. Shirkadda ayaa hadda haysata saddex xafiis oo Los Angeles, CA, Virginia Beach, VA iyo Denver CO, oo leh xarumaha xogta labada Los Angeles, CA, iyo Ashburn, VA.
Waxay sidoo kale leeyihiin oo ir daudzvietīgs Web hostinga centrs waxaana haatan shaqaaleysiiya shaqaalaha 300 shirkadooda.
InMotion hostings – tīmekļa vietne aan shaqsi ahaan ugu hadli karo – Mashruucdayda cusub HostScore waxaa lagu martiqaaday InMotion VPS and ayaan ugu faraxsanahay wax qabadkooda.
InMotion hostings waxay ku jirtay ciyaarta martigelinta ku dhawaad ​​20 sano – rikoorkooda ganacsi ee mudada dheer waxay cadeeyeen inay yihiin mid ka mid ah bixiyeyaasha martigelinta ugu fiican suuqa.
Waxyaabo yar oo ka dhigi kara InMotion hostings ayaa ah midkoodii ugu sarreeyey (taas oo> 99,98% waqtigeedii) iyo taageeradooda macaamiisha ah. Haddii aad qabto wax dhibaato ah ama vasks weydiin, taageerada macaamiishooda bija iyo jeer waxay si deg-deg ah uga jawaabaan.
Halkan ka akhri dib-u-eegiste buuxa ee InMotion hostings
Isku dienas kalija $ 0.01 bisha koowaad (koodh kuuban: WHSRPENNY)
Marti gelinta gudaha ee gudaha ayaa u fiican shaqsiyaadka vasks qora iyo ganacsiyada yaryar. Shirkadaha waaweyn iyo websaydhada leh taraafikada culus – VPS iyo adeegayaasha ku saleysan NJ waxay bixiyaan xal aad u dabacsan.
Waxaa laga aasaasay 2004 koox ka mid ah saaxiibada jaamacadda. Xafiisyada Bulgaariya, Talyaaniga, Spānija, Ingiriiska, iyo Mareykanka.
Bilowga: 3,95 USD / mēn
Tilmaamo atslēga: Dhismo ku-meelaynta CMS-ga ah, marti-gelinta emaylka, HTTP / 2 La-kartiiyay, Aynu Encrypt Wildcard SSL.
SiteGround waxaa lagu aasaasay 2004 by koox ka mid ah saaxiibada jaamacadda Sofija, Bulgārija. Maanta, shirkadda waxaa madax ka ah Tenko Nikolov, Reneta Tsankova, iyo Nikolay Todorov.
Shirkadda ayaa tan iyo bilawday inay shaqaaleysiisay dadka 400 xafiisyadooda ku yaalla Bulgārija, Itālija, Spānija, Apvienotā Karaliste, iyo Maraykanka. Waxay hadda leeyihiin xarumo xogeed oo 6 oo kua yaala Mareykanka, Nīderlande, Boqortooyada Midowday, iyo Singapore.
Vidū vidū ah muuqaalkan ayaa ah Super Cacher, oo ah qalab dhisme oo la dhisay oo ka dhigi kara shabakadaha si dhakhso ah u shaqeeya. Muuqaal kale waa awoodda lagu rakibo Šifrēsim SSL oo kaliya dhowr jeer oo fure ah, oo ka dhigaya mid aad ugu sahlan isticmaalayaasha si ay u helaan boggooda.
Kastā oo qiimahooda dib u cusboonaysiinta loo tixgelin karo vaska yar oo tallaabo ah, waxaa xaqiiq ah inay u qalmaan tayada martigelinta ee aad soo celiso. Waxaan u maleynayaa vietnē SiteGround uu ku habboon yahay milkiilayaasha ganacsiga iyo kuwa wax qora ee xirfadlayaasha ah ee doonaya xallinta dhibaatada walwalka aan walwalka lahayn.
Waxqabadka servera ad adag – lagu qiimeeyay A dhammaan imtixaanada.
Isticmaalayaasha kasta oo raadinaya xal marti u ah eco-saaxiibtinimo, iesācēji, blogeri shaqsiyadeed, ganacsiyada yar-yar-yar, kuwa miisaaniyada isticmaala, kuwa madaxbanaan, iyo ururada aan macaash doonka ahayn.
Hal wadaagay: 0,99 USD / mēn
Premium la wadaago: 2,89 USD / mēn
Ganacsi la wadaago: 3,99 USD / mēn
Funkciju atslēga: Bezmaksas domēns, dhisaha dhismaha cusub ee cusub, saxan .xyz raqiis ah, qorshaha martigelinta ugu raqiisan.
Hada waxaa hogaaminaya agaasimaha guud ee Arnas Stuopelis, Hostinger waxaa markii ugu horreysay lagu aasaasay 2004 oo ah shirkad "Mediju mitināšana" oo ku taala Kauņa, Lietuva. Dhawr sano ka dib, waxay sidoo kale bilaabeen 000Webhost, adeeg internets ah oo lacag la’aan ah oo aan lahayn xayeesiin.
Inkastoo jūs nevēlaties shirkad martigelinaysa, Hostinger waxay leedahay xarumaha macluumaadka 8 oo ku yaal daafaha aduunka oo dhan iyadoo Singapore is noqotey ugu dambeyntii. Waxay sidoo kale ku sugan yihiin wadamada 39 waana diiwaan-galiye shahaadaysan oo buuxa ICANN.
Tan iyo markii la aasaasay, Hostinger ayaa kor u qaaday shirkad furan oo caan ah oo ku faaneysa isticmaalayaasha 29 million oo leh celcelis ahaan 20,000 cusub ee adeegsadaha cusub reizes kasta dunida oo dhan 2017.
Hantidhawrku wuxuu qiimeeyaa jeeg haddii aad rabto inta badan martigelinta ugu badan ee lielogalka ah adigoon u baahnayn inaad ku dhufatid miisaaniyaddaada.
Si fiican u-fiicnaanta waxqabadka ugu wanaagsan ee serveris.
Xulashada goobaha adeegga ee far goobood.
Newbies, boggaga shaqsiyeed, ganacsiyada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, isticmaaleyaasha miisaaniyada, kuwa madaxbanaan, ururrada aan macaash doonka ahayn, kuwa soo saarta websaydhka, adeegsadayaashahahahayo, como, wordimayayo.
Waxaa lagu aasaasay 2007, TMD Hosting waxay dabooshaa dhammaan xalalka martigelinta kala duwan: Shared, Reseller, VPS Cloud, WordPress Managed, iyo Dedicated.
Qorshaha Bilowga: 2,95 USD / mēn
Qorshaha bizness: 4,95 USD / mēn
Qorshe ganacsi: 7,95 USD / mēn
Tilmaamo atslēga: Domēna bilaash ah, Weebly diyaar, 60-simbols tijaabin lacag la’aan ah, NGINX, Aan Encrypt WildCard SSL, koodh sicir-dhimis gaar ah “WHSR7”.
Iyada oo tālu xarumood oo xog ah lagu faafiyay Mareykanka oo dhan iyo xarun xogta dibedda ah oo ku taal Amsterdam, TMD Hostings waxaa lagu abaalmariyey Xulashada Tifaftiraha PC.
TMD hostings waxay bixisaa qorshayaal martigelineed oo kala duwan, oo is a jiraan la wadaago, iibiyeyaal, VPS, daruur, WordPress maamushay, iyo adeegyo marti-gelin ah oo heersare ah.
TMDHosting ma aha wax hagaagsan laakiin waxaan ku talinayaa TMD Bogagga loogu talagalay bloggers ama ganacsi yar-ilaa-dhexe ah oo u baahan xal marti-gelin web isku halleyn ah. Kaliya maaha inay bixiyaan bandhigyo xasiloon oo kumbuyuutareed iyo tan oo ah astaamo waxtar leh, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin qaar ka mid ah kooxda taageerada macaamiisha ugu fiican ee warshadaha.
Haddii aad ka fekereyso Qorshaha Bixinta ee Wadaaga ah, waxaan kugula talin lahaa inaad tagto Qeybta Qorshaha Ganacsiga maaddaama kharashyada dheeraadka ahi ay ka badan yihiin ama ka yar yihiin isku mid ($ 8,95 / mo vs waqa $ 50)..
Goobta horumarineed ee saaxiibtinimo leh oo leh lehacacter võimalikle ah.
Soosaarayaasha WordPress, kas jums patīk, ja jums ir suuq geynta, jūs varat WordPress ee horumarsan.
Waxaa la aasaasay 2007, oo ir leedahay shirkad ir leedahay shirkadda Exabytes.
WP Muhiim ah: USD 17 mēnesī
WP Geek: USD 77 mēnesī
Tilmaamo atslēga: Bog bilaash ah .blog domēns, HTTP / s & NGINX wakiil, shahaadada SSL bilaashka ah, 100 + mawduucyada WP ee bilaashka ah, Jetpack shaqsiyeed / Xirfadlaha ayaa lagu soo daray.
Maya 24 7 ku sheekaysan ama taageero telefons.
Dhammaan shirkadda Dienvidaustrumu Āzija martigelinta shirkadda Exabytes, WPWebHost waxay bilaabeen safarkooda 2007 waxayna ujeedadoodu tahay inay siiyaan dadka isticmaala qalabka isgaarsiinta muhiimka ah iyo xalal farsamooyinka makuumaadaka ee website.
Waxay bija labi izvēlējies xarumo xogeed oo de Yenver, Co, iyo Singapūra un tu esi patiesībā xawaare xawaare xawli leh oo dega Maraykanka iyo Asia Pacific.
WPWebHost waa mid a mid ah shirkadaha ugu fiican ee martigaliya ee ku yaalla Koonfur Bari Asia iyo inta ay ku suganyihiin ganacsi tan iyo 2007, waxay sii wadaan inay bixiyaan qiime macquul ah oo tartan ah ee loogu talagalay martigelinta WordPress.
Waxqabadka servera adag.
Ugu Fiican Bogagga Weyn ee Websaydhada: A2 Hostings, InterServer, Pārdošana
Arinka ku saabsan marti-gelinta websaydhka ee la wadaago, badiyaaaba waad ku xaddidan tahay tirada websaydhyada aad ku marti-gelin karto koonto kasta iyada oo ku xidhan qorshaha. Xisaabaadka martigelinta VPS, kurā nav atrodams xaddidmo domēns laakiin waxaa loo kala soocayaa tirada Kheyraadka uu qorshe kasta leeyahay.
Šabakada Martida Wadaagga
UzņēmumsWebsaydh 1 WebsaydhWebsaydhka 2-10 WebsaydhkaWebsaydhka aan xadidnayn
3,99 USD / mēn USD 5,99 mēnesī 13,99 USD / mēn
4,00 USD / mēn 4,00 USD / mēn 4,00 USD / mēn
3,95 USD / mēn USD 5,95 mēnesī USD 11,95 mēnesī
2,95 USD / mēn USD 5,95 mēnesī USD 11,95 mēnesī
USD 0,90 mēnesī 2,89 USD / mēn 3,99 USD / mēn
3,92 USD / mēn USD 4,90 mēnesī USD 9,31 mēnesī
2,95 USD / mēn USD 4,95 mēnesī 7,95 USD / mēn
USD 3,00 mēnesī USD 17,00 / mēn USD 77,00 mēnesī
UzņēmumsHeerka GelitaankaHeerka dhexePapildu
USD 17,99 mēnesī 29,99 USD / mēn USD 49,99 mēnesī
18,00 USD / mēn 30,00 USD / mēn USD 54,00 / mēn
USD 80,00 mēnesī USD 120,00 mēnesī 160,00 USD / mēn
20,00 USD / mēn 40,00 USD / mēn USD 80,00 mēnesī
USD 12,95 mēnesī USD 29,95 mēnesī –
USD 25,00 mēnesī 35,00 USD / mēn 50,00 USD / mēn
USD 29,97 mēnesī 52,97 USD / mēn 62,97 USD / mēn
400,00 USD / mēn 900,00 USD / mēn 1 500,00 USD mēnesī
29,00 USD / mēn 49,00 USD / mēn 69,00 USD / mēn
Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Globālā ~ 500 ms
Dhamaan qorshayaasha Turbo (marti gelin wadaag ah) ama ka sareysa Dhamaan qorshayaasha Globālā ~ 500 ms
Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Globālā ~ 200 ms
Dhamaan qorshayaasha Kaliya martigelinta WP ee Maareeya Haa laakiin u baahan qaabeynta gacanta ASV & ES ~ 450 ms
Marti gelinta Node.js waxay bilaabataa oo kaliya USD 3,70 mēnesī uz A2 hostingu.
Inta badan martigaliyayaasha websaydhadu ma bixiyaan vasks badan oo ku saabsan habka aaladaha horumariyaha loogu talagalay koontada martigelinta la wadaago. A2 Marti-gelinta iyo Interserver waa ka-reebitaan naadir ah oo sameeya. Kuwa raadinaya dhinaca martigalinta VPS, deegaannada badankood waa la habeyn karo.
Halkan guji un aad u booqato Marts-gelinta A2 / Halkāni guji un aad u booqato Interserver.
Waxaa jira heerar badan oo adeegsadayaasha WordPress, laga soo bilaabo amatieri-ka ilaa iyo kuwa khibrada u leh inay codeeyaan howlahooda WordPress. Ogaanshaha tan, martigaliyayaasha websaydhadu waxay sidoo kale bixiyaan noocyo kala duwan oo ah qorshayaal iyo astaamo u gaar ah WordPress-ka sida qalabka wax lagu kariyo. Qorshayaasha loo maareeyay WordPress waa xulasho wanaagsan kuwa doonaya gacan hagis. Waxaa jira qaar ka mid ah martigaliyayaasha sidoo kale leh khabiiro WordPress ah sida shaqaalaha taageerada.
UzņēmumsMaamulaha WordPressTaageerada Khabiirka WPAstaamaha WordPress ee Gaarka ah
Iestudējums, WP-CLI, A2 Optimizēts – plugin gaar ah oo loogu talagalay waxqabadka ugu fiican
Sākotnējā tīmekļa vietne, kas attiecas uz Fiican Qorayaasha: GreenGeeks, Soo dhaweynta, TMD Hosting
Tusaale – Martigeliyaha martigeliyaha ee la wadaago wuxuu bilaabmaa kaliya $ 0.80 / mēn – Waa kufiican kuwa madaxa-bannaan ee u baahan degel deg deg ah.
Qoraayaasha, doorashada marti-geliyaha websaydh ee wakhtiga badbaadiya ayaa ah mudnaanta koowaad. Dhisme si sahlan loo adeegsado (dhisa oo hagaajiya degel deg deg ah), websaydh (si aad ula xiriirto macaamiisha iyo daabacayaasha), iyo qiime qiime jaban (ganacsigaaga aasaasiga ah ayaa wax qoraya) waa seddexda bahi.
UzņēmumsQiimaha ^ Dhismo Goob FududLiistka
4,00 USD / mēn
USD 0,80 mēnesī
USD 3,00 mēnesī
USD 25,00 mēnesī
Xusuusin – Qiimaha diiwaangelinta ee martigelinta websaydh kelya.
Kufikāņu muddada-dheer: A2 Hostings, InterServer
Milkiilayaasha websaydhadu waxay ogyihiin in maalgashiga bilowgu uu yahay kaliya qayb ka mid ah qiimahooda guud. Tan waxaa u sabab ah arrimo kaladuwan sida qiimaha martigalinta. Bixiyeyaasha martigelinta websaydhada badankood waxay bixiyaan qiimo-dhimis saxeex ah oo ir adag tahay in laga hor tago. Si kastaba ha noqotee, qiimayaashu si aad ah ayey kor ugu kacaan markii la gaaro cusboonaysiinta qorshahaaga. Markaad tirineyso qiimaha suurtagal ee marti-geliyaha websaydhka, maskaxda ku hey tan qayb ka mid ah qorshayntaada.
UzņēmumsSaxiixida ^ RenewalGuarantee
3,99 USD / mēn USD 9,99 mēnesī 90 maalmood tijaabo bilaash ah
4,00 USD / mēn 4,00 USD / mēn 30 maalmood tijaabo bilaash ah
3,95 USD / mēn USD 11,95 mēnesī 30 maalmood tijaabo bilaash ah
USD 5,95 mēnesī USD 14,95 mēnesī 30 maalmood tijaabo bilaash ah
2,15 USD / mēn USD 11,95 mēnesī 30 maalmood tijaabo bilaash ah
3,92 USD / mēn 7,99 USD / mēn Markasta oo lacag dib loo soo celiyo
USD 4,95 mēnesī 7,95 USD / mēn 30 maalmood tijaabo bilaash ah
60,00 USD / mēn 60,00 USD / mēn 30 maalmood tijaabo bilaash ah
27,00 USD / mēn 27,00 USD / mēn 100 maalmood tijaabo bilaash ah
29,00 USD / mēn 29,00 USD / mēn 30 maalmood tijaabo bilaash ah
Marti gelinta Websaydhka Shaqsiyeed ee Ugu Fiican: GreenGeeks, Soo dhaweynta, TMD Hostings
Sida marti-gelinta qorayaasha, degel websaydh shakhsiyeed waa inuu noqdaa mid la awoodi karo oo si fudud loo isticmaali karo. Iyada oo aan loo eegin in ay tahay in la daabaco CV-gaaga ama kor u qaadista ‘astaantaada shakhsiga ah’ – Dhisme si sahlan loo isticmaali karo, astaamaha websaydhka, iyo qiime-dhimista la awoodi karo ayaa ah kuwo aad muhi geliyaha websaydhka shaqsiyeed.
Kuwa martigelinaya kaliya hal degel internet, Hostinger wuxuu bixiyaa xalka ugu jaban ($ 0.80 / mo diiwaangelinta). TMD hostings iyo GreenGeeks waxay bixiyaan wax qaali ah laakiin waxay martigeliyaan degello aan xadidneyn waxayna bixiyaan taageero macaamiil oo wanaagsan.
Pirmdiena, plkst. Fiican ee Isticmaalayaasha Boqortooyada, Pusdiena: Kinsta, SiteGround
U tixgeli sida duulimaadka – Marka isticmaaleyaasha Ingiriisiga ahi ay galaan degel internet ku leh Austrālija, codsiyadiisu waxay ka duulaan England – Bariga Dhexe – Aasiya – Australia – Aasiya – Bariga Dhexe – England si ay natiijada ugu soo noqdaan. Waqtiga duulimaadka ayaa ah daahida shabakadaas.
Haddii boggaas gaarka ah lagu abaabulo England, codsiyada waxay ku duuli lahaayeen gudaha Anglija oo kelių, iyadoo la yareynayo waqtiga safarka.
Si aad u aragto sida daahfurnaanta ugu dahado nolosha dhabta ah, waa tan tusaale.
Sawirka shaashadda, waxaad ka arki kartaa waqtiga jawaabta server-ka ay ku kala duwan yihiin meesha iyo meesha. Goobtu si dhakhso ah ayey ugu dheertahay (8ms) oo loogu talo galay buundada tijaabada ah ee Maraykanka isla markaana tartiib tartiib ah ayey ugudambeysay qeybaha imtixaanka ee Japan Iyo Australia (367ms iyo 414 ms)..
Tani waxay sharraxaysaa sababta daahiddu ir muhiim u tahay markaad dooraneyso websaydh.
Xubinteyda kooxdu waxay ku sameeyeen falanqayn latency qaar ka mid ah shirkadaha martigeliya xarumaha leh xarumaha xogta ee ku yaal Boqortooyada Midowday oo aan u qiimeeyo iyaga oo ku saleynaya qiimaha, astaamaha, iyo daayaaya. Aasaaska natiijooyinkiisa imtixaanka, SiteGround – oo leh xarun server-ka fadhigeedu yahay London, waxay ka mid ahayd kuwa martida loo ahaa xawaare sare. Kinsta, dhinaca kale, waxay ku shaqeysaa serveris – tas ir piemērots Google Cloud ee Londonā (oo tayada xawaaraha si wanaagsan loo xaqiijiyay).
Web HostLocation LocationResponse laiks
Vietne Londona 34. kundze 101. kundze
PickAWeb Enfield 35. kundze 104. kundze
Internetka Wadnaha Līdsa 37. kundze 126. kundze
HostingaUK Londona, Maidenhead, Notingema 41 kundze 272. kundze
Degdeg Deg Deg ah Glostera 59 kundze 109. kundze
tsoHost Meitene 68. kundze 582 kundze
eUK Hoyga Veikfīlda, Maidenhead, Notingema 34. kundze 634. kundze
12. Waxa ugufiican Websaydhada Malaysiya & Kuwa Singapūra